QALABKA KORONTADA LAGU GOOYEY: SHARAXAADDA, QAYBAHA UGU MUHIIMSAN, OO KA SOO BAXAYA KOR U-GUURAAGA GACMAHA LEH (SAWIR, VIDEO) - INFRASTRUCTURE
Corn waa mid aad muhiim u ah sida mid ka mid ah cuntooyinka muhiimka ah ee dadka iyo xayawaanka, iyada oo ay ugu wacan tahay content sare ee nafaqooyinka.
Marka ay sii kordheyso cuntada, waa lagama maarmaan in la kala sooco miraha ka soo baxa ubaha. Hannaankani waa mid dhib badan.
Sidaa darteed, si aad u sahlanaato, waxaad ku sameysan kartaa qaas ah hadhuudh khaas ah gacmahaaga.
Hadda waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Aqoonsiga iyo qaybaha waaweyn
Qalabka lagu nadiifiyo hadhuudhka cobs wuxuu leeyahay magacyo badan: sheller, rushka, crusher, sheller, jiidista, iwm. Qalabkani waa qalab kaas oo ku qalabeysan ilkaha iyo gaas. Waxay sameysey gacanta, waxay kuu ogolaaneysaa inaad si fudud u fududeyso oo aad u dhaqaajiso habka loo farsameynayo, kala soocida hadhuudhka ilaa dhowr daqiiqadood. Xaaladdan, qofka ayaa looga baahan yahay oo kaliya inuu dhegeysto dhegaha qalabka.
Qalabka nadiifinta hadhuudhku wuxuu noqon karaa mid ballaaran, oo loogu talagalay dhowr cobs (hal ama laba bac), iyo yar yar, halka hal meel madaxa la dhigo.
Ma taqaanaa? Corn - mid ka mid ah dhaqamada qadiimiga ah iyo kuwa la cuni karo. Sidaa daraadeed, celcelis ahaan reer Mexico waxay ku dhinteen qiyaastii 90 kg oo galley ah intii lagu jiray sannad, iyo qiyaastii 73 kg halkii maraykanka.
Noocyada hadhuudhka ah ee loo sameeyaa hadhuudh iyo hadhuudh, oo aan kuu sheegno, wuxuu ka kooban yahay:
caarada laga saaro saddex godad (mid loo seexdo cobs, midka kale (oo dabool ah) oo ka soo baxaya cagaha cirifka ah, tan saddexaad ee ka soo baxaysa miro) iyo dabool;
duubista birta birta ee ilkaha;
gushers for bixinta miraha kala go ';
engine (1.5 kW, ilaa 1450-1500 revolutions daqiiqadii);
mashiinka qumman ee rikoodhka;
lugaha leh lugaha.
Si faahfaahsan oo ku saabsan qaybaha keegga ee hadhuudhka leh gacmahaaga ayaa laga heli karaa fiidiyaha.
Faa'iidada beeraha waxaa laga yaabaa inay: noqoto mid furfuran, fara badan, hilib fiiqan, qorsheeyaha baradhada, malab-saaraha, bambo-gacmeed, xashiishad, mishiinka yaryar, miro yar.
Jidhku wuxuu ka samaysan yahay mishiinka dharka lagu dhaqo (gaasoole gaasku sidoo kale waa ku habboon yahay), dusha sare ee daboolkiisu daboolo. Laba dalool waa in lagu sameeyaa kiiska: mid waa in lagu xiraa daboolka koorta ama dhejiska - dhagaha diirran ayaa duuli doona, cirridka waa in loo dhajiyaa kan kale - miiraha la nadiifiyey ayaa si taxadar leh uga bixi doona. Dhinaca hoose ee hoose waa dalool kale oo yar yar ee mashiinka. Kiiska waxaa la dhigayaa taakuleeynta lugaha. Dhexdhexaadinta jirka waxaa lagu dhajiyaa qashinka qalabka, kaas oo loo samayn karo siyaabo badan. Waxaa laga sameeyey bir ah oo leh dhumucdiisuna tahay 4 mm. Fiidiyowga waxaad bixineysaa, naqshadeeyuhu wuxuu sameeyey siddeed saf oo ilko ah oo ku saabsan 8 mm sare on. Sida laga soo xigtay sayidkeed, waa mahadsan tahay qalabkan in hadhuudhkii hadhuudhku aanu waxyeello lahayn, laakiin ka tago 100% isdhaafsi. Dhamaan qashinka waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo godad kaas oo miro la daadin doono. Xaaladdeenna, godadka dheeraadka ah waxaa si toos ah loogu soo dhoweeyaa meel kasta oo ka mid ah ilkaha.
Diskooladu waa inay ahaataa 1.5-2.5 cm dhexroor yar oo ka hooseeya hoose. Fahamka u dhexeeya qashinka iyo derbiyada dhinaceed waxaa loogu talagalay in uu halkaa ka helo miro iyo ku daadinayo cufka.
Waxaa sidoo kale jira talooyin ku saabsan sida loo qodo godadka dhejiska iyo xargaha xarkaha ee iyaga ku yaal, taas oo ka soo celi doonta hadhuudhka ka soo jeeda. Waxay noqon karaan kuwo badan ama dhowr qaybood.
Waa muhiim! Waxaa lagugula talin karaa inaad ku dhejisid dhamaan qaybaha xargaha iskeelka isku midka ah si markaa haddii ay dhacdo qaab-dhis dheeraad ah ama dib-u-hagaajin, waxaad isticmaali kartaa hal fure oo dhamaan isku xirnaanta..
Baabuur ayaa lagu rakibay dhinaca lugta lugaha, mashiinka ayaa go'an. Dhabarka dambe ee kursiga ayaa ku xiran badhanka bilowga ama qaybta xakamaynta. Jidhka waa in si adag loo xiraa daboolka si markaa qalabka korontada ku shaqeynin uusan u duulin. Waxaa jira ikhtiyaar xiiso leh marka saxaarada saxda ah lagu lifaaqo daboolka sare, ee ugu hooseysa ee ku xiran daboolka.
Naqshadani waxay badbaadin doontaa wakhti yar, sababtoo ah hal qayb ka mid ah cobs ayaa ku jira silsilad, mid kale waqtigaan mar hore ayaa lagu dhejin karaa saxanka, ka dibna fur furka si ay u seexdaan qolka. Si kastaba ha noqotee, waa inay ahaato mid sahlan oo sahlan in la furo daboolka, laakiin waa in aan la qaadin muddada foosha.
Mabaadi'da hawlgalka qalabka
Mabda'a howlgalinta kalluumeysatada hadhuudhka ah waa mid sahlan. Kobbinta qaboobaha waxaa kor ku shubmay korka mashiinka. Dabadeed mootadu waxay ku soo noqotaa, taas oo gacan ka geysata suunka inuu bilaabo inuu u wareego mishiinka iyo, si waafaqsan, qalabka dhismaha.
Waa muhiim! Dareemku waa inuusan u rogin wax ka badan 500 rikoodhkii daqiiqadii, haddii kale miraha si xun ayay u dhaawacmeen, cobsahana way jabeen. Qalabkani waa inuusan sameynin in ka badan 1500 oo marxalado ah daqiiqad kasta. Sidaa daraadeed, xawaaraha qaansada ayaa loo baahan yahay in la yareeyo saddex jeer.
Ilkaha ama koritaanada kale ee daaqada waxay garaacaan hadhuudh ka baxsan cobs. Waxay ku dhacaan godadka iyo meelaha bannaan, hoos ugu dhacaan hoose ee jirka iyo gacan ka geysta soo noqoshada hal ama dhowr musqulo, xoog-saaridda iyo hawada hawada ah ee qulqulaya, ka dibna geli weelka horay loo dhigay ama boorska xiran.
Iyada oo gacan laga helayo xooga culeyska iyo xoogagga xoogga leh, cobs buuxa ayaa hoos u dhacaya waxaana lagu burburiyaa ilkaha, oo hore u madhan - kor u kac. Markaad furto albaabka si aad uga baxdo cobs nadiif ah, waxay u duulaan dhulka.
Qurxinta indhaha ku haysa waxay noqon kartaa: tirooyinka beerta, qulqulka qallalan, sariirta dhagaxyada, xayndaab alpine, ilo, xayawaan, jirridda, sariiraha ubaxa, wattle, dhagax weyn, iyo trellis.
Ka hor inta aadan samaynta Booqday Furimaha Gacmaha oo gacmahaaga ah, sawir sawir ah oo si taxadar leh u tixgeliya sida dhammaan faahfaahinta lagu soo lifaaqi doono. Sidaa darteed waxaad fahmi doontaa qalabka aad u baahan tahay iyo waxa xoojiya ee aad isticmaali doonto.
Furitaanka ka bixitaanka cobska nadiifka ah waxaa loo samayn karaa hab sidaas u sameeya oo lagu xiro bacda. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad si dhakhso ah u soo qaadato cobsada meel hal meel ah oo aan waqti ku ridin inaad ku ururiso dhamaan deyrta.
Haddii aad isticmaasho tuubo gaas ah sida qashin, markaa waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh u sameyso ka hor intaadan jarin, sababtoo ah waxaa jiri kara gaaska dabiiciga ah. Iyada oo tiknoolajiyada, sida saxda ah loo nadiifin karo awoodda, waa inaad marka hore bartaa webka.
Caadi ahaan korontada korontada waxay ku soo noqotaa mishiinka suunka, laakiin haddii mootadu aanay aad u awoodin, waxaad si toos ah ugu dhejin kartaa mashiinka. Waxyaabaha ugu muhiimsan - si loo hagaajiyo mashiinka si ay u noqoto tirada kacdoonada diskku ka badnayn 500.
Si sahlan u qaadida qolka dukaanka qolka gadaasha ilaa wadada, giraantu waxay ku dhegsan yihiin lugaha.
Ma taqaanaa? Marka laga reebo xaqiiqda ah in hadhuudh loo isticmaalo badeecada cuntada, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sameeyo rinji, balaastik, caag, dhejis, khamriga, iyo qurxinta.
Hadda waxaad taqaanaa sida loo kariyo hadhuudhka guriga si deg deg ah iyo wax aan dhibaato lahayn. Qaybta iskaa wax u qabso ayaa lagu siiyaa adiga oo aan isticmaalin tamar badan oo uma baahna aqoon gaar ah ee soo saaridda. Waxaa la samayn karaa hal maalin. Waa ku filan inaad isticmaashid sawirro diyaar ah iyo talooyin, iyo sidoo kale inaad barato nooca iyo mabda'a shaqada sheller ee fiidiyaha.
Haddii aadan haysan qalab kugu habboon, ama aanad haysan waqti si aad "udheertid", waxaad iibsan kartaa qalab diyaar ah. Xaalad kastoo, sheller, ha iibsato ama gacanta lagu sameeyo, waxay kuu noqon doontaa xalka dhibaatada sida loo dhaliyo hadhuudhka guriga.